Mabasa api anonzi akakosha? | Kugadzira uye zvidzidzo
Mabasa api anonzi akakosha?
Maite Nicuesa | 17/11/2021 23:44 | Jobho Kubuda
Mabasa api anonzi anokosha? Mabasa ese akakosha, zvichireva kuti nyanzvi dzese dzinoita basa rakakosha. Basa rega rega remushandi wega wega chikamu chechikwata chechikwata mukambani. Bhizinesi rega rega rinotarisana nevateereri varinobatana navo mumashambadziro aro ekushambadzira. Zvakadaro, Kunyangwe zvikamu zvese zvine chekuita, kune mamwe mabasa anotonyanya kukosha. Ndiko kuti, iwo akakosha nekuti anoenderana nekugara zvakanaka kwemunhu.
Kukosha kwemabasa akakosha kwave kuoneka mumamiriro edenda. Mumamiriro ezvinhu ekukurumidzira kurongeka kwezvinhu zvinokosha kunoshanduka. Ndiyo panguva iyoyo apo mabasa akakosha anowana kukosha kukuru. Kune mamwe mapurojekiti, kune rumwe rutivi, anogona kumiswa pasina kushandura zvinooneka rhythm yechokwadi.
1 Mabasa akabatana nevezvenhau
2 Mabasa akatarwa muchikamu chemabasa emariro
3 Nyanzvi dzehutano
4 Nyanzvi dzinoshanda mumunda we Logistics
5 5. Nyanzvi dzinotarisira vanhu
Mabasa akabatana nevezvenhau
Kutsvaga ruzivo nevaverengi kunowedzera munguva yekusava nechokwadi. Nechikonzero ichi, vezvenhau vanoita basa rakakosha senzvimbo yekunongedza nzanga. Ivo vanopa zvakanyatsosimbiswa uye zvakanyorwa data razvino.
Mabasa akatarwa muchikamu chemabasa emariro
Upenyu hunomhanya mumamiriro ezvinhu akaoma. Nzira yekuchema inogona kuitika munguva yezvimiro izvi. Kuonekana kumufi ichokwadi chinoburitsa shanduko mune iripo yeavo vari pedyo newe. Nyanzvi dzinoshanda mumariro dzinopa basa rinokosha munzanga.
Sezvatakambotaura, mabasa akakosha ndeaya anobatana nezvido zvevanhu. Nenzira iyi, kana chero rudzi rwechiitiko chikaitika, munhu anogona kubata sevhisi yavanoda. Zvakakosha kukoshesa hutano hwehutano mune chero nguva yekarenda. Murwere anogona kuona zviratidzo zvechirwere chipi zvacho munguva yechando, matsutso, chirimo uye chirimo. Naizvozvo, nyanzvi dzoutano vanoita basa remaoko.
Mafemasi, semuenzaniso, anosimudzira kusimudzira hutano kubva mukuvapo kwavo munharaunda. Iyo inzvimbo yekusangana yevavakidzani vari munzvimbo yepedyo. Mufesi inyanzvi yakavimbika kumhuri. Mumwe munhu anopa zano uye anogadzirisa kusava nechokwadi kunobvira.
Nyanzvi dzinoshanda mumunda we Logistics
Chitoro chechikafu chinopa kutarisisa kwakakosha, sezvo vatengi vanofamba kuenda kunzvimbo yekugadzira ngoro yekutenga. Zvigadzirwa zvakawanikwa pamasherufu echitoro zvakatevera nzira yekutanga iyo yaita kuti zvinhu zvese zvinyatso kurongeka munzvimbo yekutengesa catalog. Nyanzvi dzinoshanda mumunda we Logistics dzine pesvedzero yakanaka pazvikamu zvakasiyana zvevanhu.
5. Nyanzvi dzinotarisira vanhu
Kune nyanzvi dzinoita basa rakakosha kubva pakuona kwehutano. Vanopa rubatsiro uye kutarisira kune vamwe vanhu. Semuenzaniso, kuchembera kunogona kukonzera kudiwa kwerutsigiro rwekuita mamwe mabasa kumba. Kubatanidzwa kwevashandi vanoshanda mundima iyi kune simba rakanaka pamusoro pehupenyu hweavo vanogamuchira rubatsiro urwu.
Kune dzimwe nyanzvi dzinoita mabasa anokosha munzanga yanhasi. Somuenzaniso, vashandi vanoita basa rine chokuita nokudzivirira kuchengeteka. Mabasa api anonzi anokosha? Avo avo, panguva yekuvharirwa vaigara muhurongwa hwedenda, vakatevera rhythm yavo yenguva dzose kuwedzera kunaka kwenharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Mabasa api anonzi akakosha?
Chii chinonzi Dzidzo Yevacheche